बझाङ जिल्लाभर ५३ वटा डोजरले जथाभावी १६५ वटा सडक खन्ने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय खानेपानी आयोजना र विद्युत् गृह बन्द भएका छन् । एउटा गाउँ नै सार्नुपर्ने उजुरी बोकेर स्थानीयहरू मुख्यमन्त्री गुहार्न पुगेका छन् । स्थानीय तहले विकासका नाममा गाउँ भित्र्याएका डोजरहरूको कथा ।
बरिष्ठ पत्रकार कनकमणी दिक्षितको कम्पनीले ‘विद्युत चोर्यो !’
काठमाडौँ । शनिबार दिउँसो ग्राण्डी अस्पताल पुगेको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ । धापासीस्थित अस्पतालको छतमा अवतरण गर्ने क्रममा उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो ।
लामा उगे खाङ्सेल खाङ्डोङले आज भन्दा ४०० वर्ष अगाडी स्थापना गरेको ग्वान्दा गुम्बा सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. २ मा अवस्थित छ । यो शेर्पा समुदाय तथा बौद्ध धर्मावलम्बिहरुको अत्यन्तै पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वको गुम्बा हो । यो गुम्बा मेन्चुक खोला र टकर्मा गुम्बाको करिव बिच भागमा अग्लो र विशाल चट्टानी पहराको फेदमा खण्डहरको रुपमा रहेको छ । समुद्री सतहबाट ३२७० मि. उचाईमा रहेको पुरातात्विक महत्वको यो स्थल ठुल्सिक रिम्पोछेका चेला कासङ लामाले ई. २००६ मा ३१८५ मि. उचाईमा निर्माण गरेको टकर्मा गुम्बाबाट उत्तरपट्टि करिब आधा घण्टाको पैदल दुरीमा अवस्थित छ । मोपुङ सामुदायिक वन क्षेत्रको घना जङ्गलमा अवस्थित ग्वान्दा गुम्बा नजिकै करिब ५०० मि. दुरीमा ग्वान्दा गुम्बासँगै स्थापना गरिएको पुरातात्विक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको माने पनि देख्न सकिन्छ ।